Teamspeak | January 2020
Ikekwe, mgbe ị wụnye TeamSpeak, ị na-eche nsogbu nke usoro na-ekwesịghị ekwesị maka gị. O nwere ike ị gaghị enwe afọ ojuju na olu ma ọ bụ nhazi ntọala, ị nwere ike ịchọrọ ịgbanwe asụsụ ma ọ bụ gbanwee ntọala nke interface ihe omume ahụ. N'okwu a, ị nwere ike iji ọtụtụ nhọrọ maka ịhazi onye ahịa TimSpik.
Anyị na-egwu egwu TeamSpeak
TeamSpeak abụghị naanị maka nkwurịta okwu n'etiti ndị mmadụ. Ndị nke ikpeazụ, dị ka a maara, na-apụta na ọwa. Maka ụfọdụ atụmatụ nke usoro ihe omume ahụ, ịnwere ike ịhazi mgbasa ozi nke egwu gị n'ime ụlọ ebe ị nọ. Ka anyị lelee otu esi eme nke a. Ịhazi mgbasa ozi nke egwu na TeamSpeak Iji malite igwu egwu egwu na ọwa, ịkwesịrị ibudata ma hazie ọtụtụ mmemme ọzọ, ekele maka nke a ga-eme mgbasa ozi ahụ.
Usoro maka ịmepụta ihe nkesa na TeamSpeak
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi emepụta ihe nkesa gị na TeamSpeak ma mee ntọala ya. Mgbe ihe okike gasịrị, ị ga-enwe ike ijikwa ihe nkesa ahụ, nye ndị ọrụ nhazi, mepụta ụlọ ma kpọọ ndị enyi ka ha na-ekwurịta okwu. Ịmepụta ihe nkesa na TeamSpeak Tupu ịmalite ịmepụta, ṅaa ntị n'eziokwu ahụ na ihe nkesa ahụ ga-arụ ọrụ naanị mgbe agbagharịrị kọmputa gị.
Nhazi Nhazi TeamSpeak Server
Mgbe ịmepụtara ihe nkesa TeamSpeak nke gị, ịkwesịrị ịga n'ihu na ntanetị ọma ya iji hụ na ọrụ ya dị jụụ ma dị jụụ maka ndị ọrụ niile. Na mkpokọta e nwere ọtụtụ parameters na akwadoro ka hazie. Hụkwa: Ịmepụta ihe nkesa na TeamSpeak Ịhazi nkesa TeamSpeak Ị, dị ka onye nchịkwa isi, nwere ike ịhazi ntọala ọ bụla nke ihe nkesa gị - site na otu akara ngosi iji mechie ohere maka ụfọdụ ndị ọrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-egosi gị otu esi etinye TeamSpeak Client na sistemụ arụmọrụ Windows 7, ma ọ bụrụ na ị nwere mbipute ọzọ nke Windows, ị nwekwara ike iji ntụziaka a. Ka anyị were usoro nrụnye niile. Ịwụnye TeamSpeak Mgbe ị budatara usoro kachasị ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ site na saịtị ọrụ ahụ, ịnwere ike ịmalite nhazi ahụ.
TeamSpeak na-enwetawanye ọtụtụ ndị na-egwu egwu n'etiti ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-enwe mmasị ikwu okwu n'oge egwuregwu ahụ, yana n'etiti ndị nkịtị na-achọ ịkọrọ ndị ụlọ ọrụ buru ibu. N'ihi ya, e nwere ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ n'akụkụ ha. Nke a na-emetụtakwa ime ụlọ, nke a na-akpọ usoro a na-akpọ usoro.
Otu esi eji usoro TeamSpeak
Ejila mmemme maka nkwurịta okwu n'oge egwuregwu na-ama ọtụtụ ndị gamers. E nwere ọtụtụ mmemme ndị dị otú ahụ, mana TeamSpeak nwere ike weere nke ọma dịka otu n'ime ihe ndị kasị adaba. Iji ya, ị na-enweta ọrụ ndị mara mma, nkwenye dị ala nke ihe onwunwe kọmputa na nnukwu ntọala maka ahịa, nkesa na ime ụlọ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Teamspeak 2020